CleverTap: Nchịkọta Ahịa Azụmaahịa na Ngalaba Segmentation | Martech Zone
CleverTap na-enyere ndị na-ere ahịa mkpanaka nyocha, nkewa, itinye aka na tụọ mbọ ha na-azụ ahịa na ekwentị ha. Ikpokoro ahia nke mobaịlụ na-aghota ihe omuma nke ndi ahia nke oma, injin nkewa di elu, na ngwa ndi oru di ike n’ime otu uzo ahia nke nwere ọgụgụ isi, na-eme ka ọ dị mfe ịnakọta, nyocha, na ime ihe gbasara ndị ahịa na milliseconds.
Enwere akụkụ ise nke ikpo okwu CleverTap:
Dashboard ebe ị nwere ike ịkekọrịta ndị ọrụ gị dabere na omume ha na njirimara profaịlụ, gbasaa mkpọsa ezubere iche na ngalaba ndị a, ma nyochaa arụmọrụ ọ bụla.
SDKs nke ga - eme ka ị soro omume ndị ọrụ n’ime ngwa ngwa gị yana weebụsaịtị. SDK anyị na - enyere gị aka ịhazi ngwa gị site na ịnye gị ohere data profaịlụ onye ọrụ.
API nke ahụ ga - eme ka ị ziga profaịlụ onye ọrụ ma ọ bụ data omume sitere na isi mmalite ọ bụla na CleverTap. API anyị na - enyere gị aka ịbupu data gị na CleverTap maka nyocha na ngwaọrụ BI ma mee ka ozi ndị ahịa baa ọgaranya na CRMs.
Mmekọrịta na nyiwe nkwukọrịta dị ka SendGrid na Twilio, ndị na-enye akara dị ka Alaka na Tune, yana nyiwe ntụgharị dịka Facebook Audience Network.
Webhooks nke ahụ ga - enyere gị aka ịmalite usoro ọrụ na usoro azụmaahịa gị ozugbo ihe ruru eru mere.
CleverTap Mobile Marketing Platform Atụmatụ:
Ndi oru - Nkọwapụta kpọmkwem ebe ndị ọrụ kwụsịrị.
Nchịkọta Njide - Tụọ ole ndị ọrụ ọhụụ gị bataghachi.
Na-asọ - Jiri anya nke uche hụ otú ndị ọrụ si agagharị na ngwa gị
Pivots - Njirimara ụlọ ọrụ maka ihe ngosi data na nghọta ndị ahịa.
Profaịlụ Onye Ọrụ bara ọgaranya - Ọgaranya ọrụ profaịlụ ịghọta ọrụ mma
Uninstin - Sochie ma nyochaa ngwa uninstalls.
Ngwaọrụ Crossovers - Nweta otu echiche nke ndị ọrụ ka ha na-esi na mkpanaka gaa na mbadamba na desktọọpụ.
Soro ndị ọrụ na Channels Ha Na-ahọrọ - Na-emetụta ndị ahịa site na ịmepụta mkpọsa njikọta ahaziri iche nke jikọọ na ọwa ọ bụla.
Ụgbọ okporo ụzọ - Jiri nlezianya na-ewu ma napụta mgbasa ozi omnichannel dabere na omume ndị ọrụ gị, ọnọdụ ya na usoro ndụ ya.
Mgbasa Ozi Dị Mma - Gbaa predefined mkpọsa ka idowe ọrụ, mbanye njikọ aka, ma belata churn.
Eme mkpọsa na ndokwa - Hazie otu oge, ugboro ugboro, ma bute mkpọsa dabere na omume na njirimara onye ọrụ.
Personalization - Zipu ahaziri ahazi site na iji aha, ọnọdụ, na omume gara aga iji chụọ njikọ aka.
Nnwale A / B - Tụlee oyiri, ihe okike, ma ọ bụ oku na-aga ime ihe maka izipụ dị irè.
Nkewa onye ọrụ - Ndị ọrụ otu dabere na ọrụ ha, ọnọdụ ha, yana ozi profaịlụ iji tinye ha na ezigbo oge.
Ntughari nkwuputa - Zipu ozi nkeonwe, ozi nke oge na ngwaọrụ mkpanaka onye ọrụ.
Ozi Email - Soro ndị ọrụ na mpụga ngwa gị na ozi email ezubere iche.
Na-App ificationsma Ọkwa - Zipu amamọkwa ngwa dị mkpa dabere na njirimara na omume onye ọrụ.
SMS .ma Ọkwa - Nyefee ndị ọrụ oge na-enweghị mmetụta na ozi ederede ahaziri iche.
Nkwupụta Mgbasa Ozi Weebụ - Iru ndị ọrụ gị na ihe nchọgharị weebụ ha ọbụlagodi na ha anọghị na weebụsaịtị gị.
Mgbasa ozi na-ere ahịa - Tinyegharịa ndị ọrụ ụfọdụ site na ịchekwa Mgbasa ozi Facebook na otu ndị ọrụ ahụ.
Tags: Nnwale A / BAPIalakaMgbasa Ozi Dị MmaNgwaọrụ CrossoversOzi EmailSoro ndị ọrụ na Channels Ha Na-ahọrọnetwọọdụ ntanetị facebookNa-asọNdi oruNa-App ificationsma ỌkwaỤgbọ okporo ụzọmobile nyochamobile ngwamobile ngwa ahịaikpo okwu ngwa ngwa mkpanakamobile sdkkeonwePivotskpọbata ọkwaMgbasa ozi na-ere ahịaNchịkọta NjideProfaịlụ Onye Ọrụ bara ọgaranyasdkSendGridSMS notma ỌkwaEme mkpọsa na ndokwa-akụTwilioUninstinNkewa onye ọrụNkwupụta Mgbasa Ozi WeebụWebhooks
2018: Otu ụlọ ọrụ na ndị ahịa na-eji Social Media